Ukuthatha iifoto zokukhetha ukuskena iifoto ngeFotoScan kaGoogle | Iindaba zeGajethi
UGoogle usungula ifotoScan ukuskena iifoto ngokusebenzisa ubuchule bokufota
Ukufunda ngomatshini kuthathwe ekufotweni kuyakwazi yenza iziphumo ezinomtsalane ukongeza isichazi "computational." Obo buchule okanye itekhnoloji ivumela uGoogle ukuba cebisa uluhlu lokudlala kuMculo odlalayo okanye uphuhlise iindlela ezintsha zokuphucula iifoto ezinesisombululo esisezantsi.
Omnye umzekelo wokuba kude kangakanani ukufunda ngomatshini kukuya kwenkqubo entsha kaGoogle ebizwa ngokuba yiFotoScan ukuskena iifoto. Ngelixa kunokubonakala ngathi lolunye usetyenziso lokuskena iifoto, iPhotoScan usebenzisa iifoto zokubala iziphumo ezimangalisayo.
Uhlelo lokusebenza olutsha lweGoogle PhotoScan izakuguqula iifoto zakho ezindala zishicilelwe kwidijithali Ngamandla okufota. Le app isebenzisa ikhamera yesixhobo sakho ukuskena iifoto zomzimba, kodwa njengoko benditshilo, ayisiyiyo kuphela ukuskena umfanekiso, kodwa iPhotoScan iya kukhathalela ukwenza ukubanjwa kokuqala kunye nefleshi esebenzayo, ke kuya kufuneka uthathe ezinye ezine xa uya kubeka ikhamera kumanqaku amane aboniswe sisicelo.
Nje ukuba kwenziwe oku, usetyenziso luya kuba luxanduva lokuqhubekeka ukushiya okokugqibela oko iya kufana nomfanekiso oskene kuwo. Iziphumo zokugqibela aziyi kuhlala zinqweneleka, kuba kuxhomekeke ekubeni wenze onke amanyathelo ngokuchanekileyo, kodwa kwiifoto ezintathu endikhe ndakwazi ukuskena, inye kuphela ekufuneka ndiyiphindile le nkqubo de ndiyifumane. iskena esifanelekileyo.
Insiza ivumela ukuba, emva kokugqiba inkqubo, unga lungisa imiphetho yomfanekiso osetyenzisiweyo ukuze ulunge ngcono. Kwaye kulapho isicelo sihlala khona, kuba akukho zicwangciso kwaye unokukhetha ukufikelela kwicandelo apho kuthotho lweengcebiso ezinikiweyo ukuze ukuskena kufezekiswe ngendlela ebhetele.
Uhlelo lokusebenza olukhulu olo usebenzisa iifoto zokubala ukukubonisa ukuba sikumanyathelo okuqala okufunda komatshini, ezo algorithms zomlingo nokunye okuninzi okushiyekileyo ukuba kungabonakala.
IfotoScan kwiifoto zikaGoogle
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » UGoogle usungula ifotoScan ukuskena iifoto ngokusebenzisa ubuchule bokufota
I-Apple iqala ukucima usetyenziso kwiVenkile ye App